ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး | အမျိုးသားလွှတ်တော်
သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဥပဒေ(မူကြမ်း)
ဒုတိယအကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းခဲ့သော အဆို (၃) ခု
ဒုတိယအကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သော ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်း(၉၂)ခု
၄၅ ရက်မြောက်နေ့အစီအစဉ် (၇ . ၁၀ . ၂၀၁၆)
(၄၅) ရက်မြောက်နေ့မှတ်တမ်း (၇.၁၀.၂၀၁၆)
မွန်ပြည်နယ်၊ မုဒုံမြို့နယ်၊ ကျုံဖိုက်ကျေးရွာအနီး၊ မော်လမြိုင်-သံဖြူဇရပ် ကားလမ်းမကြီးဘေးရှိ အမှတ်(၃)သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနက ဖျက်သိမ်းပြီးဖြစ်သည့် မြေဖြူသန့်စင်စက်ရုံနေရာတွင် နောက်ထပ်လုပ်ငန်းအသစ် ထူထောင်လုပ်ကိုင်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် မရှိပါက မူလသိမ်းဆည်းခံခဲ့ရသည့် ခြံပိုင်ရှင်မိသားစုသို့ မြေ သို့မဟုတ် နစ်နာကြေးပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ တို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောခရိုင်အတွင်း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် သစ်ထုတ်လုပ်ခွင့်နှင့် ဝယ်ယူခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးထားသော ကုမ္ပဏီ ရှိ/မရှိ နှင့် တရားမဝင်သစ်ခိုးထုတ်မှုများကို အရေးယူရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့နယ်နှင့် ရသေ့တောင်မြို့နယ်အကြားရှိ ပါဒလိပ်ကူးတို့ကို စက်တပ်(ဇက်)ရေယာဉ်ဖြင့် ကူးဖြတ်သည့် ကူးတို့အဖြစ် အစိုးရအနေဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ လဲချားမြို့တွင် တပ်ဆင်ထားသော MPT ဖုန်း များအား တပ်မတော်ပိုင် ဖိုက်ဘာဆက်ကြောင်းမှတစ်ဆင့် မိုက်ခရိုဝေ့ ဆက်ကြောင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲချိတ်ဆက်ပေးရန်နှင့် GSM ဖုန်းများအား 3G အဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
၄၄ ရက်မြောက်နေ့အစီအစဉ် (၆ . ၁၀ . ၂၀၁၆)